I-15 yezandla ezintle kwaye kulula ukuziva | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Elizabeth Catalan | 19/11/2021 19:00 | Umsebenzi wezandla, Imisebenzi yasekhaya
I-Felt yimathiriyeli eguquguqukayo kakhulu yokwenza zonke iintlobo zobugcisa obuhle, kuba inokwakheka okuqinileyo okukuvumela ukuba iphathwe kakuhle xa usika kwaye uyithunga xa uthelekisa nelaphu. Ukongeza, ayibizi kakhulu kwaye kulula ukuyifumana.
Ubugcisa obuvezwayo bubuhle kakhulu kwaye zininzi izimvo ezinomdla onokuthi uzenze kwaye ungaziqhelanisa nazo. Ukuba awukazamanga ukwenza imisebenzi yezandla, ezi I-15 yezandla zezandla oya kukubona ngezantsi kunokukukhuthaza ukuba uthathe inyathelo. Sukuphoswa yiyo!
1 Yiva ingelosi ngeKrisimesi
2 Yiva isitshixo
3 Ndeva intyatyambo yeentyatyambo
4 Isimbozo sefu seKawaii kwifowuni yakho eyenziwe yaziva
5 Isongo senkwenkwezi esenziwe ngokuziva
6 Isiphatho seNapkin kulula kakhulu ukwenza kunye nokuziva
7 Felt iphazili yabantwana
8 Ubunzima bepensile yecala
9 Felt keychain: isilo esibi kodwa esithandekayo
10 Indawo yekrisimesi eyenziwe yaziva
11 Indlela yokwenza i-cactus ezivalekileyo yokuhlobisa
12 Uyenza njani intsimbi yomqala eneentyatyambo eziviwayo. Ubucwebe obulula
13 Ziva iintyatyambo ukuhombisa ubugcisa bakho be-DIY
14 Ibhroshi yeentyatyambo evelweyo
15 Uyenza njani bhabhathane baziva
Yiva ingelosi ngeKrisimesi
IKrisimesi isondela kwaye lixesha elifanelekileyo lokulungiselela yonke imihlobiso yendlu. Kwakhona ukukhupha icala lethu loyilo ngakumbi kwaye senze ubugcisa obuthile obusebenza njengesihombiso ngesandla.
Ngokomzekelo, oku kuhle uyilo olumilise okwengelosi ukuxhoma kuMthi weKrisimesi, kumnyango wangaphambili wendlu okanye kwiishelufu zeencwadi kumagumbi.
Izinto oza kuzifuna ukwenza lo msebenzi wezandla zinemibala eyahlukeneyo, inaliti kunye nentambo, isikere, umpu weglue, izikhonkwane, intambo yomsila wempuku, iphepha kunye nepensile. Ayizukuthatha ixesha elide ukuyenza kuba ilula kakhulu. Kwisithuba Yiva ingelosi ngeKrisimesi uya kubona onke amanyathelo.
Obunye obona buchule bokuyila nobusebenzayo bezandla onokuthi ubenze bubu isitshixo esimilise intliziyo. Kwakhona lithuba elihle kakhulu lokwenza isipho esihle kumntu okhethekileyo ngesandla. Okanye uzenzele nje.
Njengemathiriyeli kuya kufuneka ufumane: i-fewling enemibala emibini, intambo kunye nenaliti, intambo yesikhumba, ifa, isikere, i-clasps, amaso anemibala, iiwasha kunye nomatshini wokwenza imingxuma.
Inkqubo inzima kancinci kodwa xa uyigqibile uya kuba neqhosha elipholileyo ngokwenene. Ukongeza, njengoko igcina iiakhawunti, kuya kukunceda ufumane izitshixo ebhegini yakho ngokukhawuleza. Ngamanye amaxesha kunzima ukuzifumana kodwa ngolu tshixo aluzukwenzeka kuwe! Uya kufumana onke amanyathelo kwisithuba Yiva isitshixo.
Ndeva intyatyambo yeentyatyambo
Lo intyatyambo Ngenye yezona zinto zintle kakhulu zobugcisa onokuthi uzilungiselele ukuhlobisa amagumbi endlu yakho, ngakumbi ukuba umhla othile usondela, njengeKrisimesi.
Uninzi lwezixhobo oza kuzifuna ukwenza le garland mhlawumbi sele unayo ekhaya. Zimibalabala, isikere, iglu, ipensile kunye nentsimbi yezibane zeKrisimesi. Ukuba awuzange uzive, kuyenzeka ukuba wenze lo msebenzi wobugcisa ngerabha ye-eva.
Kwiposi Ndeva intyatyambo yeentyatyambo Uya kuba nakho ukufumana imiyalelo yokwenza lo msebenzi mhle wokuhlobisa indlu.
Isimbozo sefu seKawaii kwifowuni yakho eyenziwe yaziva
Ukuba uthanda izixhobo zeselfowuni kwaye uyinxibe yamva nje, uya kuthanda ukwenza le meko yefowuni yakho nge kawaii cloud design. Yenye yezona zinto zintle zizivayo zobugcisa kwaye uya kuba nexesha elimnandi lokuyibumba!
Ukwenza le meko yeselula kuya kufuneka uqokelele ezi zinto zilandelayo: i-colored felt, irabha ye-eva, iinkwenkwezi, isikere, iglue, i-eva perforators yerabha, iimpawu ezisisigxina, i-blush kunye ne-cotton swab, irula kunye nepensile.
Uya kufumana onke amanyathelo okwenza lo msebenzi wobugcisa owonwabisayo kwisithuba Isimbozo sefu seKawaii kwifowuni yakho eyenziwe yaziva. Lo umile njengelifu kodwa ukuba uthanda olunye uyilo olufana nenkwenkwezi, ilanga okanye inyanga, unokukhulula ubuchule bakho.
Isongo senkwenkwezi esenziwe ngokuziva
Oku kulandelayo ngomnye wemisebenzi yezandla egqibeleleyo yokwenza nabantwana. Inemibala, iyonwabisa kwaye ungayinxiba esihlahleni sakho xa uyigqibile: isacholo esihle. Baya kuyithanda ingcamango!
Izinto oza kuzifuna kulula ukuziqokelela, ukuze ukwazi ukuzifumana lula kuyo nayiphi na into yokubhala okanye i-bazaar. Thatha amanqaku: imvakalelo enemibala, iinkwenkwezi ezizincamathelisayo, irula, ipensile, umtya okanye ivelcro, kunye nedie cutter.
Ukufumanisa ukuba yenziwa njani, ndincoma ukuba ujonge iposti Isongo senkwenkwezi esenziwe ngokuziva kuba kuqokelelwe onke amanyathelo oya kufuneka uwathathe.
Isiphatho seNapkin kulula kakhulu ukwenza kunye nokuziva
Ngaba ulungiselela isidlo ekhaya kwaye ufuna ukumangalisa iindwendwe zakho ngelaphu letafile ekhethekileyo? Bothuse ngezi amakhonkco e-napkin yenziwe nguwe. Yenye yezona zinto zintle kakhulu zobugcisa bokuhombisa itafile kwaye yenye yezona zilula. Kakhulu kangangokuba nabancinci endlwini banokukunceda ukuba wenze.
Ngemizuzu nje embalwa uya kube sele ugqibile onke amakhonkco e-napkin! Ukuze uzenze uya kufuna ezi zinto kuphela: isikere, ipensile kunye neshiti lobungakanani beDIN A4. Owu, kwaye ufunde iposti Isiphatho seNapkin kulula kakhulu ukwenza kunye nokuziva apho uya kufumana imiyalelo. Uya kuba nexesha elimnandi lokudala lo msebenzi uluncedo!
Felt iphazili yabantwana
Iipuzzle zizinto zokudlala ezintle zabantwana ukuphuhlisa izakhono zabo zokuqonda. Ezo zenziwe ngokuziva, ngokukodwa, zilungele ukusebenza kwiimvakalelo kunye nezakhono zemoto. Ukuba ufuna ukumangalisa abantwana bakho ngento yokudlala entsha neyonwabisayo, ndincoma ukuba wenze le nto inemibala iphazili emile okwebhola.
Ngowona msebenzi wezandla ulula ukwenza. Uya kuyidinga njengemathiriyeli: ilaphu elivaliweyo lemibala eyahlukeneyo, ipensile, isikere, umsonto ohonjisiweyo, inaliti eshinyeneyo kunye ne-velcro encamathelayo, phakathi kwezinye izinto. Ukuba ufuna ukufumanisa ezinye izixhobo kunye nendlela obu bugcisa benziwa ngayo, ungaphoswa yiposti Felt iphazili yabantwana.
Lo ngowona msebenzi wezandla obonakalayo onokuthi uwenze, kuba i indawo yokugcina iipensile. Ifanelekile ukuba abantwana baye esikolweni kuba kulula kakhulu ukuyiphatha. Isiphumo sixinene kangangokuba kuya kuba nzima ukuthatha indawo kubhaka.
Inkqubo yokwenziwa kweli tyala ilula kakhulu. Kangangokuba nabancinci banokukunceda ukuba uyilungiselele phantsi kweliso lakho. Iimathiriyeli ekuya kufuneka uziqokelele zezi: ilaphu eliveziweyo, intambo elastiki, ipensile, into yokusika, irula kunye neqhosha elikhulu. Ungayibona indlela eyenziwa ngayo ngokucofa kwiposti Ubunzima bepensile yecala.
Felt keychain: isilo esibi kodwa esithandekayo
Iitsheyini ezingundoqo ngomnye wemisebenzi yobugcisa evakala kakhulu. Ziza kuzo zonke iimilo, ubukhulu, kunye nemibala. Ngemiyalelo oya kuyifumana kwisithuba Felt keychain: isilo esibi kodwa esithandekayo ungayenza ngokukhawuleza. Iya kuba sisipho esihle kakhulu ukunika abantwana ukuba basebenzise izitshixo okanye baxhonywe kwi-backpack.
Njengezixhobo uya kufuna ukuziva imibala, iimpawu, iintambo kunye nenaliti yokuthunga, ukuhlohlwa kwe-monster, iringi yekhonkco kunye namaqhosha (ukhetho lwamehlo). Ngophanyazo uya kuba sezandleni zakho oku ikhonkco elihle elimilise irhamncwa.
Indawo yekrisimesi eyenziwe yaziva
NgeKrisimesi ekufutshane nekona, ufuna ukuya kujonga ubugcisa obutsha bokuhombisa indlu kulo nyaka. Enye yazo yile emangalisayo waziva engundoqo ukothusa iindwendwe kwisidlo sangaphambi kweKrisimesi.
Uya kufumana imiyalelo yokwenza ngokucofa kwiposti Indawo yekrisimesi eyenziwe yaziva kwaye njengezixhobo uya kufuna ukuva okubomvu, iglu okanye i-silicone eshushu, isikere, isiphawuli selaphu, irula, ikhadibhodi, ikhandlela kunye ne-tinsel.
Indlela yokwenza i-cactus ezivalekileyo yokuhlobisa
I-Cacti zizityalo ezinefashoni kakhulu ukuhombisa izindlu. Maxa wambi akunakwenzeka ukuba zigcinwe ekhaya ngenxa yokuba zinameva yaye abantwana okanye izilwanyana zasekhaya zinokuhlatywa ngazo. Isicombululo? Ukuba uyayithanda i-cacti, unokuhlala usenza enye ngokuziva. Zikhangeleka kakuhle!
Izinto okufuneka uzifumane ziintsimbi eziluhlaza, intambo emhlophe, amanzi, isikere, i-wadding, iteyiphu yephepha, imbiza yeentyatyambo kunye nezinye. Ungafumanisa okunye kwisithuba Indlela yokwenza i-cactus ezivalekileyo yokuhlobisa, apho uya kufumana isifundo sevidiyo esinawo onke amanyathelo ukuze wenze lo msebenzi wezandla ngesantya sakho.
Uyenza njani intsimbi yomqala eneentyatyambo eziviwayo. Ubucwebe obulula
Ngaba uyathanda ukubonisa izincedisi ezenziwe ngezandla? Obona bugcisa boqobo nobonwabisayo obuvakalisiweyo onokuthi ubenzele ukunika umzobo owahlukileyo nowobuqu kwimpahla yakho yile. ivakele ngentsimbi yomqala. Isiphumo sihle kakhulu ukugqoka zombini entwasahlobo nasehlotyeni kwaye kuxhomekeke kwimibala oyikhethayo, unokuyinxiba ekwindla nasebusika.
Qaphela ezi zixhobo ukwenza le necklace intle. Uya kudinga i-fewling enemibala, isikere, iglu, i-CD, iiperile, iibhastile, ikhonkco, i-jewelry clasp, iiperile, intyatyambo iyafa kunye nokudubula okukhulu. Unokufunda indlela yokwenza ngenyathelo elilula ngenyathelo oya kufumana kulo Uyenza njani intsimbi yomqala eneentyatyambo eziviwayo. Ubucwebe obulula.
Ziva iintyatyambo ukuhombisa ubugcisa bakho be-DIY
Iintyatyambo yenye yezo zobugcisa eziziva zilungele ukuhombisa ezinye izinto zobugcisa esinazo ekhaya ezifana neebhokisi, amakhadi, amabhande entloko, njl. Akukhe kube buhlungu ukuba nezinto esele sizilungisile xa kufuneka sizisebenzise ngokukhawuleza ukuhombisa isipho ekufuneka sisinike omnye umntu.
Inzuzo yokwenza olu hlobo lobugcisa ngokuziva kukuba akuthathi izixhobo ezininzi okanye ixesha ukuzenza. Ukuhombisa nje iifeti ezinemibala, isikere, iglu, kunye namatye abengezelayo. Kwisithuba Uve iintyatyambo ukuhombisa ubugcisa bakho be-DIY.
Ibhroshi yeentyatyambo evelweyo
I-Felt yinto eluncedo kakhulu xa usenza izixhobo ezingasetyenziselwa ukuhlobisa i-wardrobe yethu okanye ezinye izixhobo. Ngeli xesha ungasebenzisa ukuziva ukwenza i-flirty brooch ngeentyatyambo Yintoni onokuyinxiba kwilapel yebhatyi yakho.
Ezinye zezixhobo oza kuzifuna ukwenza lo msebenzi wobugcisa zezi: ivayiwe enemibala, isikere, iglu, okanye ibrooch. Ezinye izixhobo kunye nemiyalelo yokwenza ungayifumana kwisithuba Yiva intyatyambo yentyatyambo. Uyakuyithanda!
Uyenza njani bhabhathane baziva
Las amabhabhathane Zikwalungile kakhulu ukuzenza ngokuziva, nokuba kuhombisa izinto zasekhaya ezinje ngekhethini, imiqamelo okanye iikhushini okanye nokubanika njengesipho sokuhombisa isipho somhla wokuzalwa.
Le misebenzi yezandla kulula kakhulu ukuyenza kwaye awuyi kufuna izixhobo ezininzi. Qokelela nje umbala kunye nentambo, intonga yomthi, amaqhosha, iiribhoni kunye namanzi. Ukubona ukuba yenziwa njani ungacofa Uyenza njani bhabhathane baziva. Ngomonde omncinci baya kukhangeleka kakhulu kuwe!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo » Umsebenzi wezandla » I-15 yezandla ezintle kwaye kulula ukuziva
5 ubugcisa bokuhombisa iKrisimesi